Tratran’ny fisafoana tampoka : tsy migadra ao anatin’ny fonjan’i Tsiafahy Rajaonah Mbola | NewsMada
Nirefodrefotra ny poa-basy tao Toamasina: lavon’ny Fip i Alphonse, nitsoaka niaraka tamin’ny rojovy
Capsat Soanierana: destruction de plus de 1.300 armes à feu
Nihotsaka ny ampahan-drindrin’ny CEMDLAC: mpiasa enina naratra tototry ny tany, nisy no voa mafy
Violation du code d’éthique de la Fifa: Ahmad sous la menace d’une suspension.
Par Taratra sur 26/09/2020
Sarona tamin’ny fotoana tsy nampoizina ! Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa tsy migadra ao anatin’ny fonjaben’i Tsiafahy akory ilay mpandraharaha, Rajaonah Mbola sy ny teratany maorisianina roa hafa fa nomena vahana manokana. Noraisina avy hatrany ny fepetra momba izany.
Efitrano manokana arifomba tanteraka. Fantatra fa nisy ny fisafoana tampoka nataon’ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja teny Tsiafahy, ny 20 septambra lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora maraina, araka ny voalazan’ny loharanom-baovao iray. Sarona tamin’izany fa tsy ao anatin’ny fonja itazonana azy vonjimaika Rajaonah Mbola sy ireo teratany maorisianina roa. Nafindra sy mipetraka soa aman-tsara any amin’ny “batiment administrative”, biraon’ny sefo iray lehiben’ny mpiandry fonja ilay mpandraharaha. Ahitana fitaovana samihafa, toy ny fahitalavitra “écran plat”, ordinatera, vata fampangatsiahana kely, fatana mandeha amin’ny “gaz” miaraka amin’ny kojakojan-dakozia ilay efitra. Tahaka izany koa ireo teratany maorisianina roalahy, nahazo efitrano mitokana, ahitana fitaovana samihafa, mitovy amin’ireo. Natory soaman-tsara avokoa izy ireo, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao tamin’io fisafoana tampoka natao io.
Nilaza ny tompon’andraikitra voalohan’ny fonjan’i Tsiafahy, rehefa nanontaniana fa anton’izao namindrana toerana azy ireo amin’ny trano arifomba ivelan’ny fonja ny resaka toe-pahasalaman’izy telo lahy ireo.
Manoloana izany, nafindra avy hatrany, naverina ao anatin’ny fonjaben’i Tsiafahy toa ireo voafonja rehetra izy ireo. Nohamarinin’ny tompon’andraikitra koa fa tsy mitombina ny filazana fa hoe tsy salama izy ireo. Nomena fampitandremana hentitra ny tsy hiverenan’ny tranga tahaka izao koa ny lehiben’ny fonja fa handraisana fepetra avy hatrany ny momba azy, araka ny loharanom-baovao hatrany. Voalaza rahateo fa mety hanohintohina ny filaminana eny Tsiafahy sy ny filaminam-panjakana izany.
Tokony hitohy sy hiitatra amin’ny fonja hafa
Tsiahivina fa voatana am-ponja vonjimaika (MD) avokoa ary samy tsy mbola voatsara izy telo lahy ireo. Nanomboka ny 22 janoary 2020 ny nitanana an-dRajaonah Mbola raha samy tamin’ny 12 jona 2018 kosa ireo teratany vahiny roa hafa.
Araka izany, tokony harahi-maso sy hanaovana fisafoana tampoka tahaka izao avokoa ireo fonja rehetra. Ahina hiteraka kolikoly sy firaisan-tendro ny tranga tahaka izao ka ilaina ny fanohizana ny hetsika tahaka izao.
FES – Fampandrosoana: mila politika mampifamotitra ny fambolena sy ny indostria 31/10/2020
Fitantanana ny rano: naneho ny fahavononany ny sehatra tsy miankina 31/10/2020
Vidin’ny PPN: antony maro ny fiakaran’ny vidim-bary 31/10/2020
“Rugby Tsinjaka Be”: Hidona ny Makis de Madagascar sy ny RC Toulon 31/10/2020
Karate-Analamanga: nihaona voalohany, omaly, ny biraon’ny ligy 31/10/2020